Fampahafantarana ny tetik’asa« 50 Millions de Femmes Africaines ont la Parole » – Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme
Fampahafantarana ny tetik’asa« 50 Millions de Femmes Africaines ont la Parole »
• sehatra nomerika natao ho an’ireo vehivavy mpandraharaha avy amin’ny firenena 30 aty Afrika ka anisan’izany i Madagasikara ;
• manampy ny vehivavy mpandraharaha amin’ny fifanakalozan-kevitra ara-barotra sy fihariana ;
• mampiroborobo ny fianarana, ny fampianarana sy ny fizarana vaovao ary ny fahalalana eo amin’ny samy vehivavy ;
• mampahafantatra ny tetik’asan’ireo mpiray antoka isan-karazany, ireo mpiantsehatra miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana, ary koa ireo fikambanana miasa amin’ny fampivoarana ny fandraharahan’ny vehivavy.
Ny Minisiteran’ny Mponina izay misahana ny fampivoarana ny vehivavy no tompon’andraikitra voalohany amin’ity tetik’asa ity eto Madagasikara. Miara-misalahy aminy ny Minisiteran’ny Varotra (MICA) sy ny Country Team.
Hitantsika ao amin’ny tranokala « www.connectwomen.org » na amin’ny pejy Facebook « 50 Million de Femmes Africaines ont la Parole-Madagascar »
FAMETRAHANA VATO FOTOTRY NY BIRAON’NY SAMPAN-DRAHARAHA NY MPONINA TAO AMIN’NY DISTRIKA BEFOTAKA – FARITRA ATSIMO ATSINANANA	Tontosa ny fifanaraham-piaraha-miasa amin’ny CRS sy ny Minisiteran’ny Mponina, ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny Fampivoarana ny Vehivavy amin’ny alalan’ny tetik’asa MAHARO izay vatsian’ny USAID